Baiboly pejy 46 - Ny Baiboly
Voalohany < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Manaraka Farany
Eksaody toko 26 (tohiny)
17Hisy lahiny roa avy, amin'ny hazo fisaka iray, ka hatao izay hifandraisany; ka hataonao toy izany avokoa ny hazo fisaka amin'ny Fonenana. 18Hanao ny hazo fisaka hatao amin'ny Fonenana hianao; hazo fisaka roa-polo ho an'ny lafiny atsimo, an-kavanana izany. 19Hasianao faladia volafotsy efa-polo ny fanambanin'ireo hazo fisaka roa-polo ireo, dia faladia roa isan-kazo fisaka izany, no an'ny lafiny roa avy. 20Ny lafiny anankiray amin'ny Fonenana dia ny lafiny avaratra, hanaovanao hazo fisaka roa-polo koa, 21mbamin'ny faladia volafotsy efa-polo; faladia roa ambanin'ny hazo fisaka tsirairay avy. 22Hanao hazo fisaka enina hianao hatao amin'ny faran'ny Fonenana amin'ny lafiny andrefana, 23hanao hazo fisaka roa hianao hatao amin'ny zoron'ny Fonenana, ao amin'ny farany, 24dia hakambana tsiroaroa hatraty ambany ireo ka hatao miray tsara hatrany ambony amin'ny masom-bola voalohany. Toy izany no hanaovana azy roa avy; hatao amin'ny zorony roa. 25Dia ho hazo fisaka valo izy izany mbamin'ny faladiany volafotsy, faladia enina ambin'ny folo, faladia roa avy isam-panambanin'ny hazo fisaka iray. 26Hanao barany akasià hianao; ny dimy hatao amin'ny hazo fisaka amin'ny lafiny anankiray amin'ny Fonenana. 27Ny dimy koa hatao amin'ny hazo fisaka amin'ny lafiny faharoa amin'ny Fonenana; ary ny dimy hatao amin'ny hazo fisaka amin'ny lafiny farany amin'ny Fonenana, amin'ny andrefana. 28Ny barany afovoany hatao manaraka ny hazo fisaka, mahatratra ny sisiny roa. 29Petaho takela-bolamena ny hazo fisaka; ataovy volamena ny masom-bola hitoerana'ny barany, ary petaho takela-bolamena ny barany. 30Ataovy toy ny marika naseho anao tany an-tendrombohitra no fananganana ny Fonenana.
31Manaova efitra lamba amin'ny jaky volomparasy sy jaky mangatrakatraka sy lamba mena antitra ary rongony fotsy madinika voahasina, asiana sarin-kerobima, asan-tànan'ny mpanenona mahay; 32ka ahantòny amin'ny andry hazo akasià efatra, samy voapetaka takela-bolamena sy misy faraingo volamena ary miorina amin'ny faladia volafotsy efatra. 33Apetaho ambonin'ny jaigirafy ny efitra lamba, ka dia ao indrindra no hampidiranao ny fiarana'ny vavolombelona ao ivohon'ny efitra lamba; fa ny efitra lamba no hampisaraka eo imasonareo ny Fitoerana Masina sy ny Fitoerana Masina indrindra. 34Hataonao eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona ny fanaovam-panavotana, amin'ny Fitoerana masina indrindra. 35Hapetrakao eo ivelan'ny efitra lamba ny latabatra, ary eo anoloan'ny latabatra, amin'ny lafiny atsimo amin'ny Fonenana, ny fanaovan-jiro, fa amin'ny avaratra no hametrahanao ny latabatra.
36Ny fidirana ao amin'ny lay, dia anaovy efitra lamba amin'ny jaky volomparasy sy jaky mangatrakatraka sy lamba mena antitra ary rongony fotsy madinika voahasina, voatenona amin'ny soratra maro samihafa. 37Hanaovanao andry akasià dimy io varavarana lamba io, ka petahanao takela-bolamena ny andry sy hasianao faraingo volamena; ary handrendrika varahina hatao faladiany dimy hianao.
Eksaody toko 27
Ny otely fanateran-tsorona dorana; sy ny kianjany.
1Hanao ny otely amin'ny hazo akasià hianao: dimy hakiho ny lavany, dimy hakiho ny sakany, ka hitovy efatra ny lafiny, ary telo hakiho ny hahavony. 2Amin'ny zorony efatra hasianao tandrony mivoaka avy ao amin'ny otely, ary petahanao takela-barahina izy. 3Hanao tavy fandraofan-davenona momba ny otely hianao, ary sotron'afo, tavy, fitrebika, ary fatana; ataovy varahana avokoa ireo fanaka ireo. 4Ary manaova karakara varahina miendri-karato ho an'ny otely ka asio masom-barahina efatra ny zorony efatra amin'io harato io, 5dia apetraho eo ambanin'ny koronosin'ny otely avy ao ambany ary ho tonga hatreo amin'ny fisasahan'ny otely ny harato; 6manaova bao hatao amin'ny otely, bao hazo akasià, ka petaho takela-barahina. 7Hampidirina eo amin'ny masom-barahina ny bao, eo an-daniny roa amin'ny otely, rahefa hoenti-mifindra izy. 8Ataovy hobok'aty, amin'ny hazo fisaka, izy: araka ny efa naseho anao tany an-tendrombohitra no hanaovana azy.
9Manaova ny kianjan'ny Fonenana. Ny lafiny atsimo, ao an-kavanana, ny kianja dia hasianao fafy lamba rongony madinika voahasina hatao zato hakiho ny halavan'ny lafiny. 10Hasianao andriny roapolo misy faladia varahina roapolo io lafiny iray io, ka hatao volafotsy avokoa ny faraingo amin'ny andriny sy ny anjaka itohizany. 11Toy izany koa ny lafiny avaratra, hisy fefy lamba zato hakiho ny halavany, amin'ny andriny roapolo misy faladia varahina roapolo, volafotsy avokoa ny faraingo amin'ny andriny sy ny anjaka itohizany. 12Ny amin'ny lafiny andrefana dia hatao dimam-polo hakiho ny halavan'ny fefy lamba amin'ny sakan'ny kianja, ary folo ny andry, folo ny faladiany. 13Amin'ny lafiny atsinanana eo anoloany dia ho dimam-polo hakiho ny sakan'ny kianja; 14ka ny ilany iray hasiana fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho mbamin'ny andry telo misy faladia telo, 15ny ilany iray koa, fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho mbamin'ny andry telo misy faladia telo. 16Ny amin'ny vavahadin'ny kianja, dia hasiana varavarana lamba, roapolo hakiho, vita amin'ny jaky volomparasy, sy jaky mena mangatrakatraka sy lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina, misoratsoratra, mbamin'ny andriny efatra sy faladia efatra. 17Ny andriny rehetra manodidina ny kianja, dia hakamban'ny anja-bolafotsy, sy hasiana faraingo volafotsy, ary hisy varahina avokoa. 18Ny lavan'ny kianja dia ho zato hakiho, ny sakany ho dimam-polo avy, ny hahavony ho dimy hakiho, ny fefy lamba ho rongony fotsy madinika voahasina ary ny faladiany ho varahina. 19Ho varahina avokoa ny fanaka rehetra hampiasaina amin'ny raharahan'ny Fonenana, ny tsimatra rehetra ao aminy, ary ny tsimatry ny kianja.
20Omeo didy ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'oliva voatoto, hatao jiro hamelona ny lalampy lalandava. 21Ao an-trano lay fihaonana, ivelan'ny efitra lamba anoloan'ny vavolombelona, no hanamboaran'i Aarona sy ny zanany azy, hirehetany eo anatrehan'ny Tompo hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Lalàna mandrakizay izany ho an'ny zanak'Israely, hatramin'ny taranaka mifandimby.
Eksaody toko 28
1Asaovy manatona anao Aarona rahalahinao, mbamin'ny zanany, ao amin'ny zanak'Israely, mba ho mpisorona amin'ny fanompoana ahy, dia Aarona, Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Hamora, zanak'i Aarona.
2Manaova fanamiana masina ho an'i Aarona, rahalahinao, ho mariky ny fiamboniany sy ho fihaingony. 3Ireo olo-mahay rehetra nofenoiko fanahim-pahendrena no hantsoinao, dia izy no hanao ny fanamiana ho an'i Aarona mba hohamasinina izy hanaovany ny fisoronana amiko. 4Ka izao no fanamiana hataon'izy ireo: saron-tratra iray, efoda iray, akanjo lava iray, akanjo anaty misy amborodao iray, satroka hamama iray ary fehin-kibo iray. Ireo no fanamiana masina hataony ho an'i Aarona rahalahinao, sy ny zanany, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy izy ireo. 5Ny hanaovany azy dia volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika.
6Ny efodia dia hataony amin'ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina, ampifahoina amin'ny tenona lavorary. 7Asiana sorony roa izy, hanambatra ny sisiny roa hampikambana azy. 8Hitovy tenona aminy koa ny fehin-kibo hamehezana azy eo amboniny sy hiray aminy, fa hatao amin'ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina.
Pejy: Voalohany < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2807 seconds